<( ဥာဏ် ကြီး ရှင် )> - ~ LOOK for more FUNS ~
~ LOOK for more FUNS ~Search this site
<< WELCOME >><( Home Page of LOOK )>* FUTURE of Daw Aung San Suu Kyi< ( Words of Wisdom )>< ( လူမိုက်ကြီး(၁၀)ယောက် )>< e-mail address STORY >< MYANMAR in ABROAD >< ဘုရား ပစ္စည်း အဆိပ်သီး >< မျက် မှောက် မြန် မာ နဲ့ ပ ညာ ရေး >< လို ရာ စီး ပွား တိုး ကြီး ပွား ဖို့ >< ဆော်ဒီ ကျောင်း သား တစ်ယောက် ၏ e-mail တစ်စောင် ><( FUNNY RADIO )><( BEGGAR )><( EAST OR WEST )><( EXPLAINATION AT WOMEN )><( FAMILY PROBLEM )><( JEAN LADY )><( OPERATION )><( OUR COUNTRY )><( TO BE A MODEL )><( WHO WAS WRONG ?..2)><( WHO WAS WRONG ? )><( မလိမ်ရဘူး )><( ဥာဏ် ကြီး ရှင် )><( ကောသလအိမ်မက် ၁၆ ချက် )>SHARE FOR YOU~ THEY NEEP HELP~ သေတမ်းစာ ~~ EARTHQUAKE~ LOTTO LOVERS ~~ ဦးခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) နှင့် သတင်းစာပညာလေ့လာရေးသင်တန်း“ဘုရားစူးပါ့စေ တကယ့်အဖြစ်လေး”
MUSIC CORNER> Links for MUSIC LOVERS
NEED YOUR HELP ASK YOUR HEART မရမ်းချောင်း ပရဟိတ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ
SAVE THE AGEDသက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး နှင့် ထောက်ပံ့ရေးအသင်း
( FROM THE FORWARD MAIL TO ME )တစ်ခါက အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ နယူးယောက်ဘဏ်ထဲဝင်ပြီး...
" ကျွန်မ ဥရောပဘက် ခရီးတစ်လ ထွက်မလို့ ဘဏ်ကနေ ဒေါ်လာ ၅ထောင်ချေးချင်လို့ပါ " လို့ပြောတော့ ဘဏ်မန်နေဂျာက " ချေးလို့တော့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ဖိုးငွေနဲ့ ညီမျှတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အပေါင်အဖြင့် ထားခဲ့ရမယ် " ဆိုတယ်။
အဲလိုနဲ့ အမျိုးသမီးက ဘဏ်ရှေ့မှာ ရပ်ထားတဲ့ Rolls-Royce ကားသော့ပေးပြီး
အပေါင်ပစ္စည်းအဖြင့် ထားခဲ့တယ်။ ဘဏ်တာဝန်ကျသူက ကားကို ကားရပ်နားရာနေရာမှာ ထိန်းသိမ်းထားလိုက်တယ်။
တစ်လကြာတော့ အမျိုးသမီးက ဘဏ်ကို အတိုးငွေ ၁၅ဒေါ်လာနဲ့အတူ ချေးငွေလာဆပ်တယ်။
ဘဏ်မန်နေဂျာက နားမလည်စွာနဲ့ အမျိုးသမီးကို "အခုလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မေးစရာ တစ်ခုရှိတယ်။ ခင်ဗျား ခရီးထွက်နေတုန်းက ခင်ဗျားအကြောင်း ကျွန်တော်အနည်းငယ် စုံစမ်းကြည့်တော့ ခင်ဗျားဟာ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အထွေထွေ မန်နေဂျာဆိုတာ သိရတယ်။ ကျွန်တော်နားမလည်တာက ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ ဘဏ်မှာ ဒေါ်လာ ၅ထောင် လာချေး ရတာလဲ ဆိုတာကိုပဲ "
အမျိုးသမီးက သွက်လက်ချက်ချာစွာနဲ့ " နယူးယောက်မှာ တစ်လကို ဒေါ်လာ၁၅ကျပ်နဲ့ ကားကို မပျက်မဆီး၊ လူခိုးမခံရအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့နေရာ ဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲ ? " လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
တွေးတောတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ငွေကြေးရှိပြီး ဦးနှောက်မရှိတဲ့ လူထက် ဖန်ဆင်းမှုနယ်ပယ် ပိုကျယ်ပြန့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီပုံပြင်က ဖော်ပြ သွားပါတယ်။THANK YOU ( KO MYO )